« Lalaon’ny Nosy » – Kitra: mila mandresy an’i Maorisy ny Barea, anio - ewa.mg
News - « Lalaon’ny Nosy » – Kitra: mila mandresy an’i Maorisy ny Barea, anio
Anisan’ny andrasan’ny mpanaraka ny “Lalaon’ny Nosy”, amin’ity andiany faha-10, tanterahina aty Maorisy ity, ny vaovao mahakasika ny ekipam-pirenena malagasy, ny Barea, eo amin’ny taranja baolina kitra. Niakatra an-kianja voalohany, ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianjan’ny Geoges V, Flic en Flac, Maorisy, izy ireo. Ny ekipan’ny Seychelles no nifanandrina tamin’i Madagasikara nandritra izany ary isa sahala, 0 no ho 0, ny nisarahan’ny roa tonta. Raha ny tokony ho izy ary araka ny nambaran’ny mpanazatra, tokony ho mora tamintsika ny nandavo an’i Seychelles, saingy tsy ampy ny fahamatorana teny ambony kianja.
Raha hiverenana ny lalao, nanam-bintana ny Malagasy ary nahazo penalty, saingy tsy maty. Nandaka ity penalty ity i Xavier, laharana faha-6.
Ho amin’ny anio, hifandona amin’ny ekipan’i Maorisy ny Barea, ao amin’ny kianjan’i Georges V hatrany. Ho mafy ny miandry ireto mpilalao malagasy ireto, saingy tsy maintsy mandresy raha te ho tafakatra amin’ny dingana manaraka. Ho raraka avy hatrany kosa izay resy eo satria efa samy nanao ady sahala 1 no ho 1 Maorisy sy 1 Seychelles, tamin’ny andro voalohany.
L’article « Lalaon’ny Nosy » – Kitra: mila mandresy an’i Maorisy ny Barea, anio a été récupéré chez Newsmada.
Fanohanana ny fitondrana :: Hitambatra ho vondrona iray ireo kandidà tsy miankina sasany
Solombavambahoaka mahaleo tena manodidina ny telopolo no niaraka nivory tetsy amin’ny efitrano fisakafoanan’ny Antenimie­rampirenena, Tsimbazaza, omaly. Taorian’ny dinidinika no nanambaran’izy ireo ny fanohanany ny fitondrana ankehitriny amin’ny asa fampandrosoana hataony saingy hijanona amin’ny maha tsy miankina azy ireo hatrany. “Vonona hiara-hiasa amin’ny mpitondra izahay satria tanjona iray ihany no kendrena dia ny fampivoarana ny fiainan’ny Malagasy sy ny fampandrosoana an’i Madagasikara”, araka ny nolazain’ny mpikambana amin’ireto andiana solombavambahoaka ireto. Miankina amin’ireo depiote tsy miankina sasany kosa ny hisian’ny fitambarana ho vondrona iray na tsia. Misy solombavambahoaka miisa enina ambin’ny folo hafa tokoa mantsy no mbola tsy naneho hevitra hatramin’izao momba an’izay fironan’izy ireo etsy Tsimbazaza. Nicoh Richman L’article Fanohanana ny fitondrana :: Hitambatra ho vondrona iray ireo kandidà tsy miankina sasany est apparu en premier sur AoRaha.
“Toky nomena” – Fifidianana depiote :: Nandiso fanantenana ny Komity mpanara-maso ireo kandidà
«Tsy nanaja an’ireo toky nomeny ireo kandidà ». Io no fehezanteny noentin’ilay komity iombonan’ireo mpisehatra nanara-maso ny fifidianana namehezana ny fomba fahitan’izy ireo ny fihetsika nasehon’ireo kandidà solombavambahoaka nandritra ny fifidianana notontosaina, tamin’ny 27 mey 2019. “Ny komity iombonana namolavola ny “Toky nomena” nosoniavin’ireo kandidà dia mampahafantatra fa maro ireo tsy fanajana ny andininy voasoratra tao anatin’izany”, hoy ny fanambaràna navoa­kan’izy ireo, omaly. Valo amby enimpolo isan-jato no kandidà nanao sonia an’ity toky nomena ity. Porofo maro avy amin’ny tatitra nataon’ireo mpanara-maso ny fifidianana teto an-toerana sy ireo avy any ivelany no nahatsapan’ny komity, izay ahitana ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidia­nana (Ceni), ny fikamba­nana Fandio, ny Samifin, ny fikambanana “Justice et paix”… an’ireo tsy fanajana ny toky nomen’ireo kandidà solombavambahoaka. “Noho izany, aorian’ny fandalinana an’ireo loharanom-baovao ireo no hamoahana ny fehin-kevitra mikasika ny fizohiana ny “Tokony nomena”, hoy hatrany io komity mpanara-maso io. L’article “Toky nomena” – Fifidianana depiote :: Nandiso fanantenana ny Komity mpanara-maso ireo kandidà est apparu en premier sur AoRaha.
Antsirabe: voatafiky ny jiolahy ny tobin-tsolika iray, lasa ny vola tanaty coffre
Nisy nandroba, ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy teo koa, ny tobin-tsolika iray ao Ambaniandrefana Antsirabe. Omaly kosa vao nahatsikaritra ny fahavakisan’ny trano ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fitantanana ny tobin-tsolika. Ireo mpiasa handeha hiasa vao maraina no nahatsikaritra ny fahavakisan’ny birao iray ao an-trano. Voazalan’ny fampitam-baovao avy any an-toerana fa avy any andamosin-trano no nidiran’ireo jiolahy ary nivantana tao amin’ny biraon’ny tompon’andraikitra misahana ny fitantanana ny tobin-tsolika izy ireo. Lasan’ireo mpangalatra tamin’izany ny vola tao anaty vatamafihidy (coffre fort). Vola azo nandritra ny faran’ny herinandro teo ireto napetraka tao anaty vatamafihidy ireo, kanjo izao lasan’ny jiolahy izao. Tsy misy banky miasa rahateo ka izay no antony nitahirizana azy tao anatin’io vata io, araka ny fanazavana hatrany. Tsy vitan’izay fa nesorin’ireo mpangalatra koa ny “camera de surveillance” tao amin’ny birao sy ny solosaina mitahiry ny rakitsary rehetra niaraka tamin’ny “disque dur”. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny tentimbidin’ny zavatra very sy ny vola voaroban’ireo jiolahy. Notanana nanaovana fanadihadiana kosa ireo mpitandro filaminana sy ireo mpiasa niasa tamin’io alahady alina io. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana.J.CL’article Antsirabe: voatafiky ny jiolahy ny tobin-tsolika iray, lasa ny vola tanaty coffre a été récupéré chez Newsmada.
AXIAN UNIVERSITY : Une structure diversifiée pour révéler les talents africains
Une des premières universités d’entreprise à Madagascar et en Afrique. Dans son ambition de créer un espace d’échanges de connaissances et de compétences pour ses collaborateurs, Axian lance son université d’entreprise : Axian University. Ce nouvel établissement regroupera les différentes structures de learning et de développement pour challenger et mettre en œuvre les stratégies business du Groupe Axian et révéler les talents africains. A travers des formations en soft et hard skills Axian University permet la formation continue des collaborateurs afin de leur permettre de répondre aux défis actuels et futurs de leurs marchés. Constitué de trois pôles principaux, Axian Training Center, Axian Diploma et Axian Executive Education, l’université permet le développement des compétences techniques et humaines dans divers pôles tels que commercial, financier, digital ou encore technique. Elle fédère autour de l’identité Axian et propose des formations d’envergures internationales dédiées à ses cadres. Basée sur la montée en compétences des actuels et futurs collaborateurs du groupe Axian mais également des jeunes diplômés et futurs talents panafricains, Axian University devient une des premières universités d’entreprise à Madagascar et en Afrique. « Plus que former nos talents présents et futurs, nous les aidons à grandir et à atteindre leur plein potentiel ». Le lancement d’Axian University vient confirmer l’engagement du Groupe en matière d’impact positif. En proposant des formations innovantes mais également en adressant ses offres à un public diversifié, en offrant la mobilité interne au sein des différentes entités du Groupe, Axian University permet la montée en compétences et le développement des talents dans tous les pays où le Groupe est implanté. « L’impact positif et le développement durable démarrent à l’intérieur de nos différentes entreprises et nos talents émergeant sont acteurs de la transformation économique des pays où nous sommes implantés. Cette université vient remplir la fonction de lieu de partage de connaissances et de tremplin pour les jeunes dans le milieu professionnel», affirme Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian. Recueillis par Lynda A. Cet article AXIAN UNIVERSITY : Une structure diversifiée pour révéler les talents africains est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article AXIAN UNIVERSITY : Une structure diversifiée pour révéler les talents africains a été récupéré chez Délire Madagascar.
Any avaratra andrefana: hihoa-pampana hatrany ny orana
Mitohy ny fampitandremana amin’ny habetsaky ny rotsak’orana any amin’ny faritra avaratra andrefana noho ny andian-drahona navelan’ilay rivodoza Eloise. Mbola mikorontana ny toetry ny andro eny an-dranomasina.Mety hahatratra 50 hatramin’ny 70km/ora ny rivotra entiny, arahina tafiotra ary hisy fiantraikany any amin’ny morontsiraka afovoany andrefana sy avaratra andrefan’ny Nosy izay arahina tsiokan’ny talio.Ho betsaka sy hijojo, araka izany, ny rotsak’orana amin’ny faritra avaratra andrefana Boeny sy ny distrikan’i Besalampy sy i Melaky. Mety hihoatra ny 100 mm ao anatin’ny 24 ora izany. Tsy mbola azo atao mihitsy ny miandriaka.Mikasika ny toetry ny andro ankapobenySomary hanorana tandrifin-drahona mety harahin-kotroka ny ilany andrefan’ny afovoan-tany mahazo ny atitanin’Atsimo Andrefana sy i Menabe rahampitso asabotsy. Orana tandrifin-drahona no hanamarika ny toetry ny andro amin’ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany. Ho maina kosa ny amin’ny morontsirak’Analanjirofo, Atsinanana, ny manodidina an’i Sofia sy ny tendrony avaratry ny Nosy.Ny alahady, hiandrandra orana tandrifin-drahona mety harahin-kotroka saika manerana ny Nosy ankoatra ny morontsirak’Atsinanana, i Mangoro, i Vatovavy Fitovinany sy ny morontsirak’Atsimo Andrefana sy Androy izay ho maina ny andro.Tatiana AL’article Any avaratra andrefana: hihoa-pampana hatrany ny orana a été récupéré chez Newsmada.
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 26 janvier 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 26 janvier 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Firongatry ny valanaretina: nandavo olona 6 ny covid-19 raha 442 ny tranga vaovao
Misoko mangina ary mirongatra tsikelikely ny fihanaky ny valanaretina eto amintsika, teo anelanelan’ny 16 hatramin’ny 22 janoary teo. Miisa 442 ireo tranga vaovao tao anatin’izany herinandro izany ka 252 avy eto amin’ny faritra Analamanga avokoa, tamin’ireo fitiliana natao miisa 2 968.Etsy an-daniny anefa, nandavo olona miisa enina ny covid-19 tao anatin’ny herinandro. Izany hoe iray isanandro eo ho eo hatrany izany tato ho ato ireo matin’ny valanaretina. Tafakatra 279 izany izao ireo lavo hatramin’ny 19 marsa 2020 no ho mankaty. Miisa 321 kosa ireo sitrana ary miisa 534 ireo mbola arahi-maso ny fahasalamany ary mbola tsaboina.Synèse R. L’article Firongatry ny valanaretina: nandavo olona 6 ny covid-19 raha 442 ny tranga vaovao a été récupéré chez Newsmada.
Taorian’ny fanolorana azy ireo teny amin’ny fitsarana, omaly, samy naiditra am-ponja eny Antanimora ireto vehivavy lehibe telo, voarohirohy ho nanapoizina tamin’ny biscuit zazalahikely efa-taona.Ny lehibe no manao ny ataony, ny ankizy no mitondra faisana! Lonilony sy fialonana amina fianakaviana iray mipetraka ao Ampefiloha Ambodirano ny antony nanapoizinan’ireto ramatoa telo (39, 52, 62 taona) ny zazalahikely vao efa-taona monja ka nitarika ny fahafatesany na teo aza ny famonjena natao ilay tsy manan-tsiny. Raha ny tatitra nampitain’ny polisy avy ao amin’ny “poste de police” Ilanivato, ny volana oktobra lasa teo ilay zaza no nanomboka nararin’ny fahasemporana ka nentin’ny ray aman-dreniny nijery mpitsabo ary nandaniana vola aman-karena, saingy tsy nahitam-bahaolana izany. Nihombo hatrany anefa ny aretina ka namoy ny ainy ihany ilay zazalahy. Nanomboka teo, niahiahy amin’ny fomba fahafatesan’ity zanany ireo ray aman-dreniny ary nanatona ny polisy nilaza fa misy olona tsy mifankahazo amin’izy ireo ao an-tanàna ary mety ahina ho tompon’antoka amin’ny famosaviana ilay zaza niharam-boina. Niroso tamin’ny fanadihadiana sy ny fitsirihana teny anivon’ny fiarahamonina ny polisy ka fantatra nandritra izany fa ramatoa miisa telo eo an-tanàna ihany no nanome poizina ity zazakely ity.Tsy io zaza io ihany fa olon-kafa koa, nitondra takaitra…Nandritra ny famotorana nataon’ny polisy, nitsotra ireto ramatoa voasambotra ireo fa nomen’izy ireo biskoy misy poizina ilay zaza tsy manan-tsiny noho ny disadisan’ireto olona ireto sy ny ray aman-drenin’ilay zaza. Tao anatin’ny famotoran’ny polisy hatrany no nahalalana fa tsy io zaza io ihany ny nanaovan’izy ireo ny asa ratsiny toy izao fa misy ireo olon-kafa koa nitondra takaitra. Nambaran’izy ireo fa tao ireo nitondra takaitra, tao ireo lasa malemy ary nisy koa ireo namoy mihitsy ny ainy aza. Niaiky ny heloka vitany, araka izany, ireto mpamosavy ireto ka naiditra vonjimaika am-ponja eny Antanimora rehefa avy natolotra ny fampanoavana. Na eo aza ny olana sy ny disadisa eo amin’ny samy olon-dehibe any anivon’ny fiarahamonina, tsy tokony hifatratra amin’ny zaza tsy manan-tsiny toy izao kosa ny valifaty na inona na inona tsy ifankahazoan-kevitra. Voasokajy ao anatin’ny herisetra ny fihetsika ny toy izao ka tokony homena ny sazy faran’izay henjana mihitsy ny olona manao herisetra amin’ny ankizikely toy izao.Jean ClaudeL’article Nanapoizina zazalahikely tamin’ny biscuit: vehivavy lehibe telo naiditra am-ponja a été récupéré chez Newsmada.
IKM Antsahavola: manomboka ny « I Believ’ Inona »
Efa manomboka ny hetsika « I Believ’Inona », etsy amin’IKM Antsahavola, izay ivontoeran’ny kolontsaina malagasy. Hetsika artistika iarahana amin’ny INSC’art sy ny Tsiloky izy ity, hoentina manandratra ny zavakanto malagasy sy ny fanahy ao aminy. Hita eny an-toerana ireo karazana zavakanto samihafa, toy ny fampirantiana sary, ny tononkalo, sns… Rehefa mety ho sanganasa misy fanahy hazavaina hipaka amin’ny rehetra. Hetsika mandritra ity volana janoary ity ny « I believ’Inona » hanomezana fahafaham-po sy hanehoana ny hasarobidin’ny tontolo artistika malagasy. Ankoatra izay, misy ny varotra fampirantiana sy ny fifaninana sary ary atrikasa karakarain’izy ireo eny an-toerana. Tafiditra amin’ny fanokafana ny taom-pikatrohana ara-kolontsaina ity karazana fampirantiana ity ho an’ny IKM Antsahavola. Manandratra sy manome vahana ireo manan-talenta maro isan-karazany rahateo ny ivontoerana amin’ny fanandratana ny zavakanto malagasy.NarilalaL’article IKM Antsahavola: manomboka ny « I Believ’ Inona » a été récupéré chez Newsmada.